Tezitra dia tezitra ny Minisitry ny Fitsarana HAT sy vaovao hafa
2009-05-05 @ 22:46 in Politika
Indraindray dia misy tokoa ny vaovao ahiana ho tafajanona eto an-toerana ihany fa tsy tafavoaka any ivelany. Tsy dia tsikaritro loatra, na tsy mivoaka any amin'izay famakiko ny hatezeran'ny minisitry ny Fitsarana HAT raha nangataka ny hihaona amin'ny Praiminisitry ny mpanaraka ny ara-dalàna, nahazo lapam-panjakana itoerana sady ambenana mpitandro ny filaminana maro dia maro saingy atoka-monina sy tsy mahazo mifandray amin'ny olon-kafa, ny masoivoho sy solontenan'ny firenena manana fifandraisana ara-diplaomatika amin'i Madagasikara, toy ny Amerikana, ny Frantsay, ny Alemana ary ny Afrikana Tatsimo.
Efa nahazo alalana sy tafahoana tamin'ireo parlemantera avy any Vakinankaratra migadra ao Antanimora Antananarivo moa ireto masoivoho ireto. Ny tena niompanan'ny hatezeran-dramatoa dia ny filazany fa efa nisy hatrany ny gadra politika teto Madagasikara koa nahoana no amin'izao fotoana izao vao manao izany fitsidihana gadra poltika izany ireto oloa ireto. Hatezerana diso toerana ihany anefa izany satria resaka diplaomatika ity, noho izany misy dikany ny fihetsika diplaomatika ataon'ireto olona ireto. Ahariharin'izy ireo ny tsy fankasitrahany ny ataon'ny HAT amin'izao fotoana izao.
Na izany na tsy izany tokoa dia tena mahaariana tanteraka ny isamborana ireo tao amin'ny Carlton, indrindra indrindra fa ny nisamborana an-dRamatoa Ihanta. Tsy misy azoko izay itazonana azy afa-tsy antony politika. Tsy mazaa mihitsy koa ny toerana itazonana azy fa toa samy manana ny filazany avokoa ny mpampita vaovao rehetra. Manjakandriana, Ambatolampy? Amiko manokana dia henatra lehibe ho an'ny tetezamita ny mbola itazonana io olona io indrindra indrindra.
Vaovao iray mahavariana ihany koa ny amin'ireto Saodiana namangy ny PHAT, nentin'i Michel D. Ramiaramanana avy any amin'ny tsy fantatra any. Vao nahita ny anaran'ilay olona nitondra aho dia nahatsiaro ilay TGV nohalavaina tamin'ny anarana hoe Trano Gasy Vaovao, izay nahazoany vola be tokoa... nefa toa tsy dia hita loatra izay tohiny. Nasainy nadoa vola manko ny olona manao fangatahina rehetra na dia tsy azo itokisana velively aza ny hahazoana trano, fa mbola mila fandinihana. Roboka tokoa ny maro nilahatra sady andoa vola teny amin'ny Tahala Rarihasina tamin'izany fotoana izany. Nikisaka teny amin'ny lalana mankeny Ankatsoavy eo ny foibeny ary tsy hita nanjavonana nanomboka hatreo.
Dia misy ihany koa ny nanamarika fa toa tsy taratra ihany koa izay maha-mpandraharaha azy ireto. Mba nikaroka tamin'ny milin'ny serasera tokoa ny tena ka mpiasam-panjakana ambony any amin'ny emirà hafa ankoatra an'i Arabia Saodita any no misy mitovitovy anarana aminy. Dia nampahatsiahy ilay Prince Nicholas de Lienchenstein tamin'ny andron'ny Hery Velona Rasalama ihany tokoa izy ity. Fa dia hikarakara ny resaka lafarinina sy siramamy ary menaka, hono, izy ireto. Izaho moa lasa saina fa sao dia ny menaka sy ny lafarinina eto an-toerana ka norobaina teto ihany no mody lazaina avy eo fa avy tamin'ireto Saodiana ireto.
Na izany na tsy izany, efa nisy Printsy Saodiana nandalo koa teto fony mbola teto an-tanindrazana ny filoha Ravalomanana. Tsy nisandoka izany rangahy iny fa ny fantatra ho nahaliana azy tamin'iny fotoana iny dia ny resaka vatosoa ihany. Fahadimy erantany ny filaharan'ny harenany tamin'izany fotoana izany.
Dia tsy maintsy marihana ihany koa amin'ity andro ity ny nisamborana ny mpanao gazetin'ny radio mada sy ao amin'ny The Times of Madagascar Evariste Ramanatsoavina. Voalaza moa fa ho fanadihadiana no nisamborana azy. Noraofina niaraka taminy ihany koa moa ny ambim-pitaovan'ny radio mada. Mangina aloha izao ny radio mada amin'izao fotoana izao. Mba reko ihany koa fa maro ny polisy no nandeha nankany Fenoarivo any hisambotra ny talen'ny radio mada, saingy niharam-pahavoazana ny kamiao nitondra ireto polisy ireto. NIsy ny naratra fa tsy voamarina tsara kosa raha nisy nahafatesana tamin'ireto mpisambotra ireto. NA raha voamarina aza dia tsy hivoaka ho fantatry ny besinimaro izany. Isika manko tsy mbola nahare hoe efa voasambotra io talen'ny radio mada io hatramin'izao.
Tsy maintsy tenenina eto ihany koa ny herimpon'ireo sisa mbola mahasahy miatrika tsy misy herisetra ireo miaramila ahiako ho efa mifanahanatsahana aza ny habetsahana. Tena fahasahiana miatrika ny zava-drehetra tokoa ka mendri-piderana ny nataon'izy ireo teny Tsimbazaza, eny fa na dia tsy tazana teny aza ireo depiote sy mpitarika hafa. Maneho izao fa tsy miankina amina fisiana na tsy fisiana mpitarika velively no hanaovan'ny mpanaraka ny ara-dalàna ny tolony fa araka ny nahimpony mihitsy.
Hita ho niatrika ireto andian'olona mitandro ny filaminana sy tsy mampiasa herisetra ireto ny Komandà Lylyson avy ao amin'ny zandarimaria sy ny Komandà Charles Andrianasoavina nefa tsy nampihemotra ny mpanao fihetsiketsehana velively izany. Lesona ho an'ny hafa matahotra mandrakariva hivoaka ny trano ihany koa izany. Angamba nanana henatra ihany, na tsy ampy torimaso ny Komandà Charles fa nanao solomaso maintibe izay ranamana. Amiko midika zavatra iny fanaovana solomaso iny fa samy manana ny fandraisana azy hatrany ny tsirairay.
Tsy nisy ny herisetra nandritra ny fifanatrehana, noho izany,nisy fahagagana ihany ny toe-javatra niseho talata io. Mety ho efa nihevitra ihany manko ny miaramila fa taorian'ny nahatampina ny radio mada, ka tsy nahenoana toromarika vaovao intsony, dia mety ho nisaritaka ny mpanao fihetsiketsehana tsotra ka tsy handeha hifanatrika amin'izany mpitandrony filaminana mitam-basy izany. Tsy nihevitra velively ny hiditra an-keriny any an-dapa akory ireo olona ireo fa tena fahavononana tokoa ny azy ireo. Na izaho aza miaiky ireto olona ireto. Namana iray moa no niteny fa tsy matahotra izay hitranga na inona na inona intsony izy, fa zavatra maro no efa hitany sy natrehany nandritra izay roa volana latsaka nanaovany fihetsiketsehana izay. Vehivavy io namana io. Ny vehivavy tokoa aloha hatramin'izao no tena mahery fo.
Dia ahoana ireo depiote tsy hita ny nalehany? Na ahoana na ahoana, ny mpitari-tolona no tena notadiavin'ny miaramila, mampihomehy aza ny filazana miverimberina hatramin'ny androany fa Constant ihany no tena katsahiny. Ataoko anefa fa hihasahy kokoa indray ny hafa rehefa avy nisaintsaina ny hitany tamin'ny vaovao hitany io talata io rehefa hitany fa samy nilamina ny rehetra nandritra ny fifanatrehana. Raha tena nisaina anefa ny depiote dia tsy tokony ho natahotra ny hosamborina ihany koa. Voninahitra ho anao, izay mety hirotsaka hofidiana atsy ho atsy ihany ny mety hisamborana anao noho ny firehan-kevitra fa tsy noho ny halatra na soloky ohatra.
Dia ireto aloha misy fanambarana tsara ataontsika tahiry ihany fandrao misy ilàna azy indray andro any.
Fanambaran'ny Holafitry ny mpanao gazety,
Manoloana ny fisamborana ny namana Evariste Ramanantsoavina teny amin'ny trano fonenany teny Andrononobe Analamahitsy dia maneho ny alahelony ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Vao omaly ny omaly isika no nankalaza ny andron'ny 3 mey andron'ny fahalalahana ho amin'ny asa fanaovan-gazety. Tamin'ireo hetsika samihafa no nilazan'ny minisitry ny fifandraisana Atoa gilbert Raharizatovo fa tsy hamerina ny sivana izao governemantan'ny fahefana avon'ny tetezamita izao. Voalaza mazava ihany koa ao amin'ny andininy faha-19 ny fanambarana erantany ho an'ny zon'olombelona ny fahalalahana maneho hevitra, miteny sy ny fahalalahan'ny asam-panaovan-gazety. Mbola iantohan'ny andininy faha-11 ao anatin'ny Lalapanorenana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ihany koa izany, koa heverin'ny holafitra fa fanohintohinana sy fanakatsakanana ny asam-panaovan-gazety eto Madagasikara izao fisamborana ny namana mpanao gazety ao amin'ny radio mada izao ary mbola miampy figiazana na confiscation ny fitaovana izay entiny manatanteraka ny asany.
Efa namoaka fanambarana toy izao ihany koa ny holafitry ny mpanao gazety naneho ny alahelony sy ny fanamelohana tamin'ny nahafaty ny mpaka sarin'ny televiziona rta ny 7 febroary lasa teo, sy ny fikasihan-tanana, fandratrana, famonoana ny mpanao gazety vitsivitsy teo am-panatanterahana ny asany nandritra ny krizy saingy na tsy navoaka izy ireny na notsongaina ny hevitra sasantsasany tao anatiny dia nanaovana ny antsoina hoe commentaire.
Dia miangavy ny famotsorana ao anatin'ny fotoana fohy ny mpanao gazetin'ny radio mada Evariste Ramanantsoavina ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, ary mampahafantatra fa aoka tsy ny tsy fitovian-kevitra na ny firehana politika no entina isamborana ny mpanao gazety. Mbola mangataka ihany koa ny fihaonana mivantana amin'ny Minisitry ny fifandraisana ny holafitry ny mpanao gazety.
Antananarivo faha-5 mey 2009
Amin'ny anaran'ny birao, Ruffin Rakotomaharo
Antananarivo 4 mey 2009
Raveloson Jean Constant
600 cité des 67ha
Antony: Plainte de Réserve contre le Cdt Charles A. et la HAT
Amin'izao fotoana izao tsy ahafantarana intsony ny ara-dalàna,
Anatrehan'ny fandrahonan-ko faty ny tenako nataon'ny Cdt Charles, ary natrehim-bahoaka izany teo Ankorondrano androany 04 mai 2009, sady noraisina sy nampitain'ny radio samihafa, nazava tsara, ary hita fa efa tena nokotrehina koa na ny fomba hanatanterahana azy na ny olona hanatanteraka azy ("ny boay keliko") hatramin'ny fitaovana hampiasainy,
Ka anisan'ny teniny tamin'izany ny hoe "je veux Raveloson Constant entre mes 2 mains" - "ho mahamay izy raha azonay" - tsy maintsy azonay Raveloson Constant na ho ela na ho haingana" - " mbola tsy izy ny nahazo ny nahazo ny kolonely Théophile sy Zakabe" - "mbola madio ny tanako hatramin'izao. Izaho tsy namono olona. Fa Raveloson Constant no handoto ireto tanako ireto".
Ity fifofoana aina ambaran'ny Cdt Charles ity raha heno aminy dia hoe satria izaho angaha, hono, mandrahona azy sy ny miaramila tarihany ary ny 19ème promotion.
Koa tena iankinan'ny aina ilana antoka faran'izay matotra hitam-poko hitam-pirenena avy amin'izay fahefana ara-dalàna na hafa izay mihevitra hifandray amiko ny momba ny fiarovana ny aiko sy ny tenako, momba ny zoko ary ny fitondrana araka ny rariny sy ny hitsiny ny raharaha mahakasika ahy.
Raha tsy izay dia tsy misy azo anoharana tahaka izao androany izao: tsy maintsy mitandro ny aiko aho ka misintaka tsy ho azon'ny mpifofo.
Rehefa jerena amin'ny lafiny faobe dia ambarako fa voaray anatin'ny andininy faha-6 fa indrindra ny faha-8 amin'ny fanambaran'ny groupe de Contact tany Adis Abeba ny 1 mai 2009 izao mikasika ahy izao.
Izao no fanambarana sy fiahiahiana apetrako:
1 - Ambarako fa amin'izao fotoana izao dia salama tsy misy aretina aho, na dia izay mpahazo amin'ny vanintaona mahazatra aza. Fady amin'ny hevitra ijoroako ny mandratra tena na mamono tena.
2 - Ambarako fa tsy manan-kevitra ny handositra aho raha tojo fisamborana ara-dalàna. Tsy mihevitra nyhamaly sady tsy manana izay hanaovana izany rahateo aho ary tsy hanao na inona na inona mety hanery na iza na iza hifehy ahy aman-kery na handresy ahy aman-kery.
3 - Toriako ny fiahiahiako noho ny Cdt Charles nandrahona ahy ary tànako ho tompon'andraikitra raha misy manjo ny tenako sy ny aiko: na izy mpanao amin'ny tenany manokana, na izy mpanao fisamboran'ny HAT-TGV, na/sady izy koa mpampanao izany.
4 - Toriako tahaka izany koa ny fiahiahiako azy mikasika ireo akaiky ahy sy ireo mpiara-mitarika ny fihetsiketsehana "légalistes" ho amin'ny ara-dalàna.
5 - Ambarako fa vonona aho handinika izay tolokevitra vahaolana faobe sy izay mahakasika manokana ny tenako sy ireo tranga mifanahaka amin'izany mba hivoahana amin'ny fifanandrinana politika misy.
Koa apetrako amim-panajana aminareo manam-pahefana tandrify izao fehin-kevitra izao.
Raiso, Tompoko, ny Haja ambony atolotro anao.
Dika mitovy: Antenne opérationnelle du Groupe de contact, Toutes Ambassades et représentations diplomatiques, toutes Organisation de défense des Droits Humains, tous media
Jentilisa, Antananarivo 6 mey 2009 amin'ny 00:45